Maka: amafonti e-imeyili | Martech Zone
Maka: amafonti e-imeyili
NgoLwesibili, Januwari 29, 2019 NgeSonto, ngoFebhuwari 3, 2019 Douglas Karr
Kukhona ingcindezi engapheli yabakhangisi ukuthi bathumele futhi basebenzise ubuchwepheshe bamuva futhi abaningi balwela ukuqhubeka. Umlayezo engiwuzwa kaninginingi ovela kuzo zonke izinkampani engibonisana nazo ukuthi basemuva. Ngiyabaqinisekisa ukuthi, yize kungenzeka, kunjalo ngabo bonke abanye abantu. Ubuchwepheshe buqhubekela phambili ngejubane elingapheli okungenakwenzeka ukuhambisana nalo. Ubuchwepheshe Bokusiza Lokho kusho ukuthi ubuchwepheshe obuningi be-Intanethi bakhiwe